Mifananidzo yekudhinda Machine Mutengo China Manufacturer
Home > Products > Digital Printer > T shirt Printer > Mifananidzo yekudhinda Machine Mutengo
Inosungirirwa nepakutanga Epson DX5 printer musoro ne 90 mazai pagirasi , 540 mazai (6color * 90), 1.5pl girasi rimwe nerimwe. Vatengi vakawanda vari kutengesa bhizinesi ravo zvakanaka kana vatenga Color Printing Machine , mari shoma inobatsira zvikuru. Kugamuchirwa kutumira kubvunzurudza kwatiri, isu tiri vepakutanga tisina kugadzirisa kana mupiki wehupfumi, tinopa basa rakanakisisa, teknolojia yepamusoro uye mutengo wakanaka kwauri. Izvi Zvinyorwa Zvokudhinda Machines Mutengo uye zvakazara Kuzvipira kwebasa, tinowedzera ray ray, ichawana yakanakisa kudhinda yakakwirira pachayo. Printing Machines Price isu takakupa ndiyo yakanakisisa mutengo mumusika pamwe chete nehutano hwakanaka
1. Zvose zvakajeka, ingoshanda pakombiyuta kuti udhindise, hapana chidimbu chinoshandiswa pane bhatani reClass Poster Printing
2. Kuvhima nyore uye kushandiswa kwakazara. Zvose zvinoshandiswa zvinoitwa nema software.
3. 6 mavara anosanganisira CMYK + WWWW kuita mavara ose shati yakadhindwa kusanganisira machena, madzimai, matsvuku, machena, machena, nezvimwewo.
4. Kusimba kwakasimba, kwemakore gumi ekugadzira chiitiko, zvose zvinetso pamusoro pepa printer flatbed zvakakundwa.
5. Kudhinda anti-scratch. Mucherechedzo wakadhindwa haungambofi wakashambidzwa nokushambidzwa nemashini yekugeza
6. Fluorescence printing. Iko rinoshandiswa kudhinda fluorescence kunoita kuti kudhinda kunakidze uye kunakidze.
7. Kuchenesa Kuchenesa. Rimwe bhodhi rakanyongedzwa, mupirita anogona kunatswa kamwe chete.
8. Musoro wepamusoro wekombiki yakagadzirwa nemusoro inoshandisa musoro unoshanda sechinyakare kunyange kana mushanduri usina kushandiswa kwemwedzi umwe.
9.Kubatsira shure kwekutengeserana kubva kumavhidhiyo, mumutambo uye mumasuo kunowanikwa
Mifananidzo yekudhinda Machine
A3 Ceramic Printer Machine Bata Ikozvino
Ceramic Printing on Fabric Bata Ikozvino
Multifunction T-Shirt Textile Printer Bata Ikozvino
Shoes T Shirt Garment Printer Bata Ikozvino